Puerto Rico waxay tiri 'mahadsanid' labo sano kadib duufaantii Maria
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Puerto Rico waxay tiri 'mahadsanid' labo sano kadib duufaantii Maria
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wararka Puerto Rico • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Maanta ayaa laga joogaa laba sano Hurricane Maria, Iyo Dalxiiska Puerto Rico bulshada waxay rabtaa inay ku tiraahdo WAAD MAHADSAN tahay dhamaan safarayaasha ka caawiyay Puerto Rico inay yeeshaan sanad rikoor ah ilaa iyo haatan. Iyada oo dakhliga dalxiis ee sanad-ka-taariikhda iyo soo-galayaasha rakaabku ay marayaan heerkii ugu sarreeyay, warshadaha dalxiiska, oo hadda ka mid ah nalalka ifiya ee Puerto Rico, iyo sheeko guul leh oo mudan in lala wadaago, ayaa sameysay soo laabasho taariikhi ah weligeedna ma aysan xoog badneyn.
Discover Puerto Rico waxay soo saartay fiidiyow la yiraahdo "waad ku mahadsan tahay Puerto Rico," oo la soo uruuriyay sheekooyin iyo mahadsanid waxaad ka timid Puerto Ricans oo ku tiirsan dalxiiska. Waxay iftiimineysaa muhiimadda dalxiiska iyo saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha maxalliga ah, waxayna muujineysaa sida ay saameyn u yeelashada booqashada Jasiiraddu yeelan karto. Sheekada Puerto Rico waa mid ka mid ah adkeysiga, gaar ahaan bulshada maxalliga ah, iyo kuwa dalxiisku u saameynayo maalin kasta. Nooc yar oo ka sii dheer oo fiidiyowgan ah ayaa halkan ka degay, sidoo kale.
• Soo dhaweynta in ka badan 4M booqdayaasha sanad kasta, Puerto Rico waxay ku socotaa wadadii lagu gaari lahaa sanad rikoodh jabinaya sanadka 2019.
• Sida laga soo xigtay CTO, dalxiiska Jasiiradda waxaa ku soo kordhay 62.3% 6-dii bilood ee ugu horreysay 2019.
• Puerto Rico waxay ka soo kabaneysaa 4X dhaqso badan New Orleans ka dib Katrina.
• Dakhliga dalxiiska ee YTD wuxuu marayaa meeshii ugu sareysay abid.
o Jan. - Abriil 2019 kharashka degganaanshaha hoteellada / kirada madaxbannaan marka la isku daro waxay gaareen $ 373.6M, oo ah tan ugu sarreysa 8 sano, iyo koror 12.4% ah marka la barbar dhigo heerarkii 2017 ee ka horreeyay Maria. Inta soo hartay '19 ayaa dalbaneysa 24.1% ka sarreysa '18 oo loogu talagalay hudheelada.
o Jan. - Baahida hoyga ee bisha Juun ayaa muujisay koboc weyn, oo leh hoy dhaqameedyo / kiro madaxbannaan oo la isku daray, Puerto Rico waxay ka yar tahay 2% rikoorkii ugu sarreeyay ee 2017.
• Tirinta YTD waxay ka badan tahay tan Jasiiradda weligeed soo martay.
o Guud ahaan, tirada habeennada qolka ee hudheelada iyo kirada madaxbannaan ee Q1 ayaa kordhay 17% marka loo eego 2018, taasoo soo saareysa baahida ugu badan ee Q1 ee habeennada qolka ee abid laga diiwaan geliyo Puerto Rico.
o Puerto Rico waxay xukuntay liiska 10ka dal ee ugu sareeya xagaaga xagaaga.
• Gegada Dayuuradaha ee San Juan (SJU) waxay u dhigtay rikoor Juun dadka ugu badan ee soo degay taariikhda bisha, waxayna dhaafeen rikoorkii hore ee Juun 2017.
• 8-dii bilood ee ugu horreysay 2019, Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee San Juan (SJU) waxay wax ka qabatay 11.4% ka boodka gawaarida rakaabka ah, taasoo ka dhigan wadar ahaan in ka badan 6.5M rakaab ah.
o Bishii Agoosto ee soo degtay Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee San Juan (SJU) waxay aragtay koboc 7.6% ah marka la barbardhigo Agoosto 2018, wadar ahaan 815.043 rakaab ah.
• Garoonka diyaaradaha ee Aguadilla wuxuu aasaasay diiwaanka rakaabka shaqsi ahaan iyo wadareed ee bishii Janaayo - Abriil, isagoo gaaray 251,898 rakaab ah, koror dhan 98,271 marka loo barbardhigo isla muddadaas 2018. Tani, waxay calaamad xoogan u tahay koritaanka maaddaama ay xambaarayaan awoodda.
• Saadaasha rakaabka markabka dalxiiska ee 2019 ayaa la filayaa inay jabiso diiwaanka rakaabka 1.8M.
• Jan. 2019 lambarradu waxay muujiyeen koror ah 28.9% soo booqdayaashii sanadihii hore.
• Waxaa jiray koror dhan 56.6% ee rakaabka dalxiis dalxiis marka la barbardhigo Jan. 2018.
• Xarunta Shirarka Puerto Rico, oo ah xarunta ugu farsamo-sarraysa shirarka ee Kariibiyaanka, waxay la kulantay sanadkii ugu guulaha badnaa ee taariikhdeeda 14-sano ah inta lagu gudajiray sannad maaliyadeedka 2018-2019. Waxay aragtay:
o Kordhin 26% wadarta xaadiritaanka (644,000 booqdayaal ah) celcelis ahaan 13-sano kahor.
o 96% guud ahaan qiimeynta qanacsanaanta macaamilka oo ay weheliso 21% koror ah wadarta munaasabadaha.
o 417 dhacdo marka la barbardhigo celcelis ahaan 13-sano ka hor.
• Marka lagu daro tan, iyadoo la adeegsanayo mugga taariikhiga ah ee 3-sano, iibinta kooxeed ee Jasiiradda ayaa ballansaneysa 212% ka sarreysa 2020.